क्यालेन्डर कसरी बनाउने | क्रिएटिभ अनलाइन
क्यालेन्डर कसरी बनाउने
प्रत्येक पटक एक वर्ष सुरु हुन्छ, वा हरेक पटक हामीले कुनै परियोजना सुरु गर्दा, पात्रो कसरी बनाउने भनेर जान्न हामीले गर्ने सामान्य कार्यहरू मध्ये एक हुन सक्छ।
क्यालेन्डर भित्तामा झुण्डिएको वा हामीलाई हातमा राख्न अनुमति दिने पात्र मात्र होइन। (वा मोबाइल एक) तर हामीलाई महत्त्वपूर्ण मितिहरू लेख्न अनुमति दिन्छ, विवरणहरू जुन प्रत्येक दिन खातामा लिनुपर्छ, आदि। र त्यसको लागि तपाईले एउटा किन्न पैसा खर्च गर्नु पर्दैन। तपाईं आफ्नो सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।
1 क्यालेन्डर किन बनाइन्छ
2 क्यालेन्डर बनाउँदा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ
3 Word मा क्यालेन्डर बनाउनुहोस्
4 एक्सेलमा क्यालेन्डर बनाउनुहोस्
5 सजाइएको क्यालेन्डरहरू बनाउन अनलाइन पृष्ठहरू
क्यालेन्डर किन बनाइन्छ
कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईं स्व-नियोजित हुनुहुन्छ र हरेक दिन ग्राहकहरूसँग काम गर्नुहुन्छ। तपाईंसँग धेरै छन् र तपाईं ती सबैमा काम गर्नुहुन्छ। तर डेलिभरी मिति, बैठकहरू, आदि। यो प्रत्येक मा फरक छ। र तपाइँ पनि एक अर्डर राख्न र तपाइँ प्रत्येक दिन के गर्नु पर्छ जान्न मनपर्छ।
यदि तपाईंले त्यो नोटबुकमा लेख्नुभयो भने, तपाईंले प्रायः हरेक दिन के गर्ने भनेर निर्धारण गर्न मितिहरू राख्नुहुनेछ। तर यो एउटा नोटबुक हो।
अब सोच्नुहोस् कि तपाईले पनि त्यसै गर्नुहुन्छ, केवल ए मा तपाईंले आफैले सिर्जना गर्नुभएको क्यालेन्डर, जुन साप्ताहिक, मासिक वा वार्षिक हुन सक्छ र त्यो हरेक दिन उसले प्रत्येक ग्राहकको एनोटेसनहरू जान्नको लागि तपाईंले के गर्नुपर्छ। यो तपाइँको टेबल, झुण्डिएको, आदि मा राख्न सकिन्छ। यो थप दृश्य हुनेछैन?
एउटा नोटबुक, वा कागजको पाना जहाँ तपाइँ सबै कुरा लेख्नुहुन्छ, वा एजेन्डा पनि, राम्रो उपकरण हुन सक्छ। तर क्यालेन्डर हुनेछ तपाईंलाई कार्यहरूसँग मितिहरू सम्बन्धित गर्न अनुमति दिन्छ र दृश्यात्मक रूपमा तपाईंसँग कति काम छ भनेर देख्नुहुनेछ दिनको आधारमा के गर्ने। वा यदि तपाइँसँग डाक्टरहरू, ग्राहक नियुक्तिहरू, आदि छन्।
क्यालेन्डर बनाउँदा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ
क्यालेन्डर बनाउनु भनेको तपाईंले सिर्जनात्मक रूपमा गर्न सक्ने सबैभन्दा सजिलो कार्यहरू मध्ये एक हो। ठिक छ, वास्तवमा, यो सबैभन्दा सरल मध्ये एक हो तर, तपाइँको स्वाद र तपाइँ यसलाई दिन चाहानु भएको रचनात्मकतामा निर्भर गर्दछ, यो कम वा कम गाह्रो हुन सक्छ।
साधारणतया क्यालेन्डर बनाउनको लागि वर्ड, एक्सेल, फोटोसप, अनलाइन पृष्ठहरू ... र हातमा क्यालेन्डर हुनु जस्ता उपकरणहरू मात्र चाहिन्छ। (जुन कम्प्युटर वा मोबाइल फोन हुन सक्छ) मितिहरु संग मार्गदर्शन गर्न।
उदाहरणका लागि, तपाईं जनवरीको लागि पात्रो बनाउन चाहनुहुन्छ। तपाइँलाई तपाइँको कागजातमा अनुवाद गर्न र प्रिन्ट गर्न सक्षम हुनको लागि तिनीहरू मध्ये प्रत्येक कुन दिन आउँछ भनेर तपाइँलाई थाहा छ।
यता, र वैकल्पिक रूपमा, तपाईं रेखाचित्रहरू, इमोजीहरू, चित्रहरू, आदि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। यसले पात्रोलाई नै थप दृश्य बनाउँछ।
तर त्यो संग मात्र काम गर्न सकिन्छ।
Word मा क्यालेन्डर बनाउनुहोस्
एक साधारण तालिका संग सुरु गरौं। तपाइँ यसलाई Word वा अन्य समान कार्यक्रम (OpenOffice, LibreOffice ...) मार्फत गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले के गर्नुपर्छ?
नयाँ कागजात खोल्नुहोस्। हामी तपाईंलाई पृष्ठ तेर्सो रूपमा राख्न सल्लाह दिन्छौं किनकि यदि तपाईंले यसलाई ठाडो रूपमा गर्नुहुन्छ भने, यो एक हप्ताको लागि मात्र नभएसम्म, यो राम्रो देखिने छैन र तपाईंसँग थोरै ठाउँ हुनेछ।
एकचोटि तपाईंसँग तेर्सो रूपमा छ, तपाईंले गर्नुपर्छ एउटा तालिका बनाउनुहोस्। स्तम्भहरूको लागि तपाईंले7र पङ्क्तिहरूका लागि, यदि यो एक महिनाको लागि हो भने,4वा5राख्नु पर्छ। यदि तपाईं त्यो हप्ता मात्र चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि मात्र। यदि तपाइँ हप्ताको दिनहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने दुई (सोमबारदेखि आइतवार वा सोमबारदेखि शुक्रबार (त्यो अवस्थामा यो5स्तम्भहरू हुनेछ))।
बोर्ड पातलो बाहिर आउनेछ, तर यो जहाँ तपाईं सक्नुहुन्छ कोशिकाहरू बीचको खाली ठाउँसँग खेल्नुहोस् र ती सबैलाई बराबर छुट्याउनुहोस्। तिनीहरूलाई किन विस्तार गर्ने? ठिक छ, किनकि तपाईलाई कहाँ पोइन्ट गर्न आवश्यक छ। तपाईं प्रत्येक दिनको लागि नम्बरहरू मात्र राख्न जाँदै हुनुहुन्छ, तर तपाईंले लेख्नको लागि ठाउँ पनि छोड्नुहुनेछ, उदाहरणका लागि, ग्राहकसँग भेटघाट, आरामदायी यात्रा, तपाईंले दैनिक के गर्नुपर्छ, आदि।
यस क्यालेन्डरको लागि आदर्श भनेको एक महिनाले सम्पूर्ण पृष्ठ ओगटेको छ, त्यसैले तपाइँ सुनिश्चित गर्नुहुन्छ कि तपाइँ सबै कार्यहरूको बारेमा पूर्ण रूपमा स्पष्ट हुनुहुन्छ जुन तपाइँ गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। केही, फरक महिनाहरू गर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले, तिनीहरूले के गर्छन् यसलाई खाली छोडेर टेम्प्लेटको रूपमा प्रयोग गर्छन्। अर्थात्, तिनीहरूले नम्बरहरू राख्दैनन्, तिनीहरू टेबललाई खाली छोड्छन् ताकि, जब यो छापिन्छ, तिनीहरूले तिनीहरूलाई राख्छन् र फरक महिनाको लागि समान प्रयोग गर्न सक्छन्।
यस कार्यक्रमको साथ तपाईंले केही छविहरू राख्न सक्नुहुन्छ तर तिनीहरूको उपचार वा तिनीहरूको सही स्थानको सन्दर्भमा तपाईं सीमित हुनुहुन्छ।
यदि तपाइँ सबै महिनाहरू सहितको पानामा पूर्ण पात्रो राख्न चाहनुहुन्छ भने, हामी प्रत्येक महिनाको लागि तालिकाहरू बनाउन सिफारिस गर्छौं, यसरी कि अन्तमा तिनीहरू सबै एउटै पानामा फिट हुन्छन्। समस्या यो हो कि तपाईसँग केहि लेख्ने ठाउँ छैन।
एक्सेलमा क्यालेन्डर बनाउनुहोस्
अर्को प्रोग्राम जुन तपाइँ क्यालेन्डर बनाउन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ Excel हो। यसले व्यावहारिक रूपमा Word सँग जस्तै काम गर्दछ तर एक तरिकामा यो धेरै सरल छ किनभने तपाइँसँग पहिले नै तालिका बनाइएको छ।
विशिष्ट, जब तपाइँ एक्सेल खोल्नुहुन्छ, तपाईले दिनहरू प्रविष्ट गर्नु पर्छ (सोमबारदेखि शुक्रबार वा सोमबारदेखि आइतबार) र 4-5 पङ्क्तिहरू लिनुहोस्।
एकचोटि तपाईंले तिनीहरूलाई औंल्याएपछि, बाँयामा जानुहोस्, जहाँ पङ्क्ति नम्बर देखा पर्दछ, र दायाँ माउस बटन क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ, पङ्क्तिको उचाइ चयन गर्नुहोस् र तपाईंले ती पङ्क्तिहरू चाहनुभएको दूरी सेट गर्नुहोस् (यसले तपाईंलाई बढी वा कम ठाउँ दिनेछ)। यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामी एक पृष्ठमा जाँदैनौं (तपाईले पूर्वावलोकन गर्ने बित्तिकै तपाईंलाई बताउनेछ)।
थप रूपमा, स्तम्भहरूको शीर्षमा, A देखि अनन्तता सम्म अक्षरहरूद्वारा सङ्ख्या गरिएको, तपाईंले आफूले चाहेको (5 वा 7) चयन गर्न सक्नुहुन्छ, दायाँ माउस बटन क्लिक गर्नुहोस् र स्तम्भ चौडाइ खोज्नुहोस् र यसलाई थप वा कम ठाउँ पनि दिन सक्नुहुन्छ।
एकचोटि तपाईंले यसलाई समाप्त गरिसकेपछि, तपाईंले यसलाई प्रिन्ट गर्नुपर्नेछ।
हामी तपाईंलाई पूर्वनिर्धारित मानहरूको रूपमा हप्ताका दिनहरू छोड्न सिफारिस गर्छौं। यसरी यो राम्रो हुनेछ।
यदि तपाइँ के गर्न चाहानुहुन्छ भने वार्षिक क्यालेन्डर हो, त्यसपछि तपाइँ फरक तालिकाहरूसँग काम गर्नुपर्छ। यो एउटै पानामा हुन सक्छ, केवल प्रत्येक महिना यो सानो हुनेछ ताकि यो तपाईंले राख्न वा छाप्न चाहनु भएको ढाँचामा फिट हुन्छ।
सजाइएको क्यालेन्डरहरू बनाउन अनलाइन पृष्ठहरू
यदि तपाइँ टेबल बनाउन चाहनुहुन्न भने, खाली ठाउँहरू राख्नुहोस् ... किन अनलाइन टेम्प्लेटहरू प्रयोग नगर्ने? क्यालेन्डरहरू बनाउनका लागि त्यहाँ धेरै पृष्ठहरू र अनलाइन उपकरणहरू छन्। वास्तवमा, तपाईले एक-महिना, तीन-महिना, वा वार्षिक पात्रोहरू तिनीहरूको डिजाइनमा धेरै काम नगरीकन बनाउन सक्नुहुन्छ किनभने तिनीहरू पूर्व-डिजाईन गरी आउनेछन् र तपाईलाई थोरै अनुकूलन गर्नको लागि तयार हुनेछन् र यो हो।
अल्गनस डे लास हामीले सिफारिस गरेका पृष्ठहरू तिनीहरू छन्:
काम गर्ने पात्रोहरू।
र पक्कै पनि तपाईं पनि सक्नुहुन्छ यसलाई Photoshop, GIMP वा कुनै अन्य छवि सम्पादन कार्यक्रमसँग गर्न छनौट गर्नुहोस्। यसले थोरै समय लिनेछ, तर तपाइँ यसलाई अधिकतममा अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ।
के तपाइँ सामान्यतया प्रत्येक महिनाको लागि क्यालेन्डर बनाउनुहुन्छ? के तपाई अब एउटा गर्ने हिम्मत गर्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » प्रेरणा » क्यालेन्डर कसरी बनाउने
डिब्रान्डिङ भनेको के हो?